Sonakshi Sinha Oo Bobby Deol Sare U Qaaday Xoog Badanaa Atiriishadan (+Sawiro) – Filimside.net
Sonakshi Sinha Oo Bobby Deol Sare U Qaaday Xoog Badanaa Atiriishadan (+Sawiro)
Habeen hore waxaa aqalkeeda xaflad yar ku dhigatay atiriishada Huma Qureshi waxayna xafladan ku casuumtay qaar kamid jilayaasha Bollywoodka oo waqti wacan iyo kaftan goobta kuwda qaateen.
Xidigaha ka qeyb galeen xafladan waxaa kamid ah Akshay Kumar oo xaaskiisa Twinkle Khanna lasocotay, Arjun Kapoor oo saaxiibtiisa Malaika Arora la socotay, Sonakshi Sinha, Bobby Deol, Priyanka Chopra iyo kuwa kale oo badan.
Dhamaan sawirada xidigahan laga qaaday baraha bulshada ayaa lagu faafiyay balse hal sawir ayaa hadal heyn weyn abuuray shalay ilaa maanta kaaso ah sawir laga qabtay Sonakshi Sinha oo sarre u qaadeys atooraha Bobby Deol saxaafada waxay leeyihiin”Sonakshi Sinha xoog badanaa” kkkk.
Huma Qureshi ayaa martida soo dhaweyneysay markii Sonakshi timid waxay kawar heshay in Bobby Deol soo gali rabo albaabka ayeena kusugeysay iyada iyo Huma Qureshi markii uu soo galay hab siismo ayee kusoo dhaweysay.
Balse midas waxaa kadaran inee durba sare usii qaaday wajiga Bobby Deol markaa eegto waxaad dareemeysaa in xoogaa Bobby xanuun dareemayo maadama qof ka xoog badan heyso Sonakshi midaas wey awooda dabcan ileen waa gabadha uu dhalay halyeey Bollywood Shatrughan Sinha (Canjeex).
Halkaan hoose ka daawo sawiro xitaa muuqaal ay Sonakshi sare ugu qaadeyso Bobby Deol baraha bulshadana si weyn loogu faafiyay xidigtaan kaftanka badan Bobby Deol ayee ku camiratay markaan iyo waliba sawirada kale ee xidigaha..
Waxaa Aqrisay 825